Muchenesa Mbeu, Kubvisa Matombo, Kuparadzanisa Gravity - SYNMEC
muchenesi wembeu yakanaka
kuchenesa mbeu & grader
bhinzi polishing muchina
5XZC-7.5DS Muchenesa Mbeu & G...
Kucheneswa neKugadzira Mbeu...
5X-12 yakanaka yekuchenesa mbeu / zviyo ...
5XWY inded humburumbira kureba gr...
5XZC-L Murabhoritari Yekuchenesa Mbeu &...
Zviyo mushure mekukohwa zvichange zvine tsvina dzakawanda dzakasiyana, seguruva, mashanga, dombo, ivhu revhu, nezvimwe.
Ndeipi nzira yekushanda yemuchina wekuchenesa zviyo?
SeMuchenesi Mbeu uye Mugadziri weGrader, goverana newe.
Zvese Zvaunofanirwa Kuziva Nezve Gravity Separator
Tese tinoziva kuti kukura kwehuremu hwembeu ndiko kuwedzera kukura kwayo, simba negoho. Naizvozvo, chinopatsanura giravhiti inoita basa rakakosha mukugadzika mbeu nehuremu muindasitiri yekugadzira mbeu. Saka yakawanda sei iwe yaunoziva nezve giravhiti separators? Chii chinonzi Gravity Separator?...
Muchina wekuongorora zviyo chinhu chinodiwa chemuchina mukugadzirwa kwezvekurima kwemazuva ano, uye chinowanzo shandiswa kuongorora, giredhi uye kubvisa tsvina yegorosi, chibage nembeu dzakasiyana. SeMuchenesi Mbeu uye Mugadziri weGrader, goverana newe. Tevere, ngatitaure pamusoro pezvinhu zvakati kuti...